Uhlelo lokuqala lomphakathi - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Uhlelo lokuqala lomphakathi
By Samantha.B ngo-Agasti 24, 2019
Ukubhala kuyisitsha sokulondolozwa nokudluliselwa kwezindleko zamasiko eziqoqwa yinqubo yokuqalwa.
Wazalelwa e-Egypt, ngokubhala yadluliselwa abaseFenike (nabazala kwabaseGibhithe) lapho namaQaba waboleka indiva imfihlo of genesis yayo: umsebenzi okudala webumbeko izakhi uhlelo lolimi.
Ngakho-ke, ukubhala kungumzuzu obalulekile wenqubo yokuqalwa ukuthi, ukuvimbela ukuhlambalaza kwawo, abaqalile baseGibhithe baqaphele ukufihla labo abangaziwa.
Ngeshwa, ihlaselwe engapheli emphakathini oFaro bekulindeleke ukuthi ukuqapha we "ababheki", futhi namaqaba nezihlakaniphi baba ejwayele ezithi basebenzisa budedengu zibhalwe futhi ukudideka phakathi ulwazi initiatory kanye inkawu yakhe.
Lokhu kwasusa kuya "kubuyekezwe amanani" lapho kwezombusazwe abazinze kwesikhathi ovulekile-capitalism besezikhundleni unilaterally ukuthi "uhlanga" yabo okunguye owadala impucuko, ngemva ukunakekela nemelela kabi kahle ku "Ukugwinya," ngokusho komfanekiso kaNommo Cheik Anta Diop.
Ngisho inzalo impucuko ongumGibhithe kukhona izinkampani-sub-Saharan akaphunyuki ulaka "izimpungushe" okuyinto, ngaphansi kwebhaxa ukuqonda futhi othanda (sic) black zasendle, zagcwala nasemizini yabo izindawo zokukhulekela izithombe namathempeli wenza izandla phezu engcwele isekela izinhlelo zabo ezingokomfanekiso (buso kanye eziqoshiwe) ngaphandle ukukhohlwa ukukhuluma ngokuzithandela noma esongelwa zihlaba okuqalwe!
Lona indawo yokuthi ukuphanga kwe-African Africa akuzange kugxile kuphela ezintweni zobuciko, njengoba kukholelwa ukuthi, kwandisa umbono wakhe wezwe, uDionysiac. Izinganekwane zase-Afrika ngokungangabazeki zafaka umqondo wokuphila kwaseNtshonalanga futhi zazisa ukuvela kwamafilosofi okukhona. Ekugcineni, ukuthekeliswa kwamagugu amasiko ase-Afrika, okwakufanele kudale uthando lomuntu omnyama, kwaqeda ukwanda kobandlululo. Kwafika esiphethweni sokuthi abantu abamnyama baseAfrika bangabantu abaphansi: ama-subhumans adalwe uNkulunkulu ukukhonza amadoda aphakeme amhlophe!
Umphumela zomlando okwabangelwa ukwandiswa "izwi elalotshwa" yilona ukuguqulwa zasendle namasiko ngendlela "bin" lapho, naphezu ukucwaninga, amadoda ezama ukukhipha amadimoni ukushushiswa kwabo ngomlomo-anal eqoshiwe ephepheni.
Njengoba lokhu kudoti kungasebenza njengomthamo wokufanisa wokukhiqiza izidalwa zomphakathi, akumangalisi ukuthi yilokho abayikho, okungukuthi, izimbangi zabantu ezithinta umphakathi. Ungayithola kanjani "uma ngabe abalobi bezithonjana abathinteka kakhulu?
Kungenxa yokwenza umuntu omnyama akholelwe ukuthi ukukhululwa kwakhe kuzovela ekukhethweni kwalesi siko samahlanga, izitha zakhe ezithemba ukuhlukanisa kuze kube phakade.
I kuqala akufanele kube namuhla, kulezi zikhathi zeziyaluyalu kwesakhiwo, ukukhathazeka tebuciko ukuba concoct "imibhalo enhle," kodwa ukuqala 'sokuhlanza ezitebeleni Augean ", okungukuthi bin imfucuza isiko esihlanganisa abantu ekuqhutshweni kokuphindaphindiwe kwe-infamies yesikhathi esidlule.
Impela, kunjengoba nje kuphela imfucuza izimboni kanye ukusetshenziswa ukuthi bangcolise indawo ezungezile eziphilayo zabantu, kodwa futhi imikhiqizo womsebenzi wayo lokubhala ngesinyenyela amaza temlomo-anal kungukuthi kuncike buciko ongokomfanekiso.
Kulokhu, kuxoxwa, umlobi owaziwayo ubika ukuthi uhlala ephethe iphepha lakhe le-napkin kanye namapenki lapho ezobanjelwa khona ukubhalela ukuze azikhulule emademoni akhe.
Njalo is isigwebo phezu isintu ukuba beqe umthetho ovimbelayo Obaba-abasunguli, lapho emizameni (ezihlanganisa ukuvivinya psychart iyona esikhundleni) yisona isabelo kubalulekile ivumela zifanekisela amaza futhi ukwazi ukufinyelela umphakathi wabantu.
Ngoba njengoba nje Ukuqalwa lasendulo, ukwelashwa psychart ihlose ukuqeda le ndoda "sekwephuzile" zokungazi yokuqala (i-Wazo Bambara) ezinemininingwane, okwakumenza abe kholwa inganekwane obungakhethi, umphumela ukuhlonza kusukela kumntwana kuya kumama wakhe, isisekelo se "narcissism eyinhloko".
Kuyathakazelisa ukuphawula ekudluliseleni ukuthi Narcissism eyinhloko engcwele womuntu waseNtshonalanga linamathela "ukuvikela" izinyo futhi nail ubuqotho umzimba wayo kufanele esongelwa castration (ongokomfanekiso), ngempela fantasy we umama osizakala ngombuso we-fusion ukulungisa lokho okushiwo ukuthi "ukungabi nabulungisa", ukuphucwa ipenisi.
Ngalokho-ke, indoda elandelanayo isetshenziselwa izindlela zokuqalwa kuyinhlangano engaphansi kwethonya lomama ofakazela ukuzuza i-phallus. Ukufaniswa komntwana "othintekayo" kufana nalokho kumama we-phallic. Akungabazeki ukuthi leli qiniso lokuqala ukuthi imbongi u-Aragon iveza ngendlela yakhe, lapho ethi: "Ukufundisa umama ukufundisa isizwe".
Asikwazi sikusho njalo: "Ekuqaleni wayekhona emizameni" lanelisa ngu ngumama atholwe ahlule ufanekisela ebuhlungwini ukunqunywa kwephutha clitoris wakhe (ukusoka ongokomfanekiso). Nguye owenza ukuba umuntu avele ekuhlukanisweni kweNdalo ukuze amenze abe "ukuhlala komphakathi". Lokhu kuvumela ukuba bathi wamanje ekuhlehleni esengozini okusongelayo impucuko ngenxa isimo sokudla amadoda kalowo ezithathwe amaza ka "jouissance ngaphezulu" futhi "inzuzo esiphezulu" ngenxa yokuntuleka kucocisana omama abangokomfanekiso bahlonipha ubuntu bezingane.
Siyakhathalela futhi sikhuluma ngokufudumala kwezwe "ngaso sonke isikhathi" futhi siqinisile. Ingqungquthela yomhlaba yezinhloko zikaHulumeni kule nkinga enkulu yayisimpumelelo futhi kuyinto enhle kakhulu. Kodwa siyazi ukuthi imvelaphi yazo zonke lezizinto ezimbi ezithinta isintu zitholakala engqondweni kaMuntu oqiniswe yisifiso sobumandla, futhi yilapho kufanele sibheke izixazululo zabo ?
Ngakho-ke, isithakazelo esiyinhloko sokuqala, okuyinto, ukugqugquzela ukuzimisela kobulili nokusebenzisana kwabo ngokuvumelana, kusebenza ukucubungula impucuko eyenzile, ngokuphambene nenqubo yokubhalisa endala inkolelo ye-vector bisexuality emuva ebumnyameni nokuhlukunyezwa kwe-barbarism.
Umbono wobungqingili utholakala kuphela emasiko aseNigro-Afrika. Ihlelwe ngubaba-umsunguli, umthunzi wokuqala, ukulungisa indlela yokuzimisela ubulili ngokususwa kwejwabu kanye ne-clitoris.
Kungenzeka kuthathe isikhathi eside ukugcina imizamo yabantu yokwakha impilo yomphakathi.
Kwakudingeka kuqaphele ukuthi izimbangi, ezigxile ekushaya indlwabu kanye nomzabalazo wokubusa ngokobulili, "azizange zihlangane". Baziphatha njengezidalwa ezizimele futhi bahlala e-autarky.
Kwakudingeka kuqaphele ukuthi i-phantasm yezinwele njengebhinqa kanye ne-clitoris njengepenisi yavimbela isifiso socansi nokuziphatha komuntu.
Ngokungangabazeki lokho kwakungumthombo wokukhulelwa kanye nenqubo yokuqalwa: ukukhishwa okungokomfanekiso kokwaneliseka kwalezi zitho zobulili ezingcolile, ukuvumela ukucabanga kwezitho zobulili zangempela ezenzelwe ukwaneliseka ngokobulili kwisakhiwo senhlalakahle.
Ngaphezu kwalokho, lo mgomo wezenhlalakahle uchazwe ngokucacile ngunkosi yokuqalwa komamukeli: "Kusukela manje, ngeke usasebenzisa i-masturbation ukukunika injabulo. Inhlangano iyayinqabela futhi ifuna ukuba ufeze izifiso zakho nomlingani ozithandayo. "
Ngakho-ke, ngeziko kwafika ukubonakala komuntu (ipenis carrier) nowesifazane (ngegciwane). Futhi lokhu kwakuyimvelaphi yalowo mbhangqwana lo msebenzi wokuphila komndeni kanye neselula yomphakathi.
Isiko sokuqala sifundisa ukuthi isiko, ubuhlobo phakathi kwezidalwa zobulili obufanayo kanye nemidlalo yezenhlalakahle zadalwa amandla "okubhema" okuphumela ekuqothulweni kwe-prepice kanye ne-clitoris. Ngamanye amazwi, umphakathi ubeka umyalelo wokuvimbela ukuphakama komuntu ukuba "kujabulele" nokuthi "ngaphezulu kwezenzuzo".
Ngakho-ke thina sinelungelo ukubuza ukuthi intando Western Nations uncoma kwabasendulo Afrika abamnyama ukulahla umkhuba wabo lasendulo ngokocansi (okusekelwe heterosexuality), futhi manje izimo "ukuthuthukiswa ethi" yenqubomgomo zabo ububele obuningi bobulili obufanayo ngeke bujabulele kusasa ukunqoba kwezimo zokufa, I-scruples iyabaluleka, inikezwe isigxobo.
Usuke usabela "Uhlelo lokuqala lomphakathi" Imizuzwana embalwa edlule